Aqriso: Liiska magacyada xubanha R/W Kheyre ku wehliya safarka Washington | Caasimada Online
Home Warar Aqriso: Liiska magacyada xubanha R/W Kheyre ku wehliya safarka Washington
Aqriso: Liiska magacyada xubanha R/W Kheyre ku wehliya safarka Washington
Muqdisho (Caasimadda Online) – Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka baxay wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo Ra’isal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, waxaana ay ku wajahanyihiin dalka Mareykanka.
Wafddigan ayaa waxaa ay kulamo Magaalada Wanshington kula yeelanayaan Madaxda Hay’adaha lacagta iyo Bangiga Adduunka halkaas oo la filayo in dib u eegis lagu sameeyo isbeddelka dhaqaalaha Soomaaliya.
Wafddiga Ra’isal wasaaraha oo ay ku jiraan mas’uuliyiin u badan Wasiirro, Lataliyayaal iyo Xubno kale ayaa lagu wadaa in ay halkaas heshiis lagu cafinayo deynta lagu leeyahay Soomaaliya kula yeeshaan Madaxda IMF iyo Bangiga Adduunka.
Xubnha la socda Ra’isalwasaaraha ee tagaya Mareykanka ayaa waxaa ay kala yihiin;
1- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
2- Wasiirka Maaliyada Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle.
3- Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya Jamaal Xasan Maxame.
4- Taliyaha Nabad Sugida Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
5- Hanti-Dhowraha Guud ee Qaranka Maxamed Maxamuud Cali.
6- Lataliyaha dhinaca amniga ee Madaxweynaha Cabdi Siciid Cali.
7- Sarkaal NISA ka tirsan C/llaahi Liibaan Daahir.
8 – Sarkaal Sare oo NISA ah C/llaahi Aadan Kulane.
9- La Taliyaha Gaarka ah ee RW Khayre Samira Gaid.
10- Xoghayaha maamulka Gobolka Banaadir Cumar C/risaaq.
11- Madaxa Warfaafinta ee Xafiiska RW Khayre Cali Nuur Salaad.
12- Lataliye Sare ee RW Khayre, Cabdi Maxamed C/llaahi.